dayniile » Dowladda Cambodia oo Badbaadinaysa Shaqaalo Loogu Haysto Soomaliya
Dowladda Cambodia oo Badbaadinaysa Shaqaalo Loogu Haysto Soomaliya
Wasaaradda arimaha dibada ee dalka Cambodia gaar ahaan safaarada ay ku leedahay caasimadda Bangkod ee dalka Thailand ayaa waxa ay sheegtay in ay ka shaqeenayaan sidii loo caawin lahaa dib u soo celinta 18 shaqaale muhaajiriin ah oo la socday dooni kaluumeysi oo laga leeyahay dalka Thailand kuwaa oo ku sugan xeebaha biyaha soomaaliya.
Iyadoo la eegayo hadal uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arimaha dibada ee combodia Chum Sounry ayaa waxa uu sheegay in wasaaradu ay la shaqeyneyso safaaradda ay ku leedahay magaalada Bangkok iyo ciidamada booliiska iyaga oo kaashanaya hay’adaha caalamiga ee muhaajiriinta si dib loogu soo celiyo muwaadiniinta u kala dhashay dalka combodia.
Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in booliisku ay badbaadiyeen shaqaale la socday doonti kaluumeesi kaa oo sheegay in 18 qof oo kale ay ku sugan yihiin xeebaha biyaha soomaaliya.
Mr Sounry ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale baaritaano ay ku hayaan booliiska aduunka ee Interpol kuwaa oo codsaday in loo soo diro dalka Kenya si loo baaro in ay ahaayeen kuwo ka ganacsada tahriibinta dadka iyagoo dib loogu celin doono gudaha dalka Thailand kuwaa oo ku sugnaa biyo u dhaw dekadda magaalada Bosaaso.
Waxa uu afhayeenka intaa ku daray in maxkamadda dalka combodia loo diyaariyay dhamaan documentiyada looga baahan yahay ragaasi si maxkamada ay u dhageesato eedamaha lagu soo rogay.